भारतको अग्रणी व्यावसायिक ई-काउन्सिल ट्रेनिंग प्रदायक
प्रमाणन कार्यक्रम समावेश छ
आधिकारिक र संरचित
EC-Council प्रमाणन कार्यक्रम
संसारको अन्वेषण गर्नुहोस्नैतिक ह्याकिंगअभिनव र सबै भन्दा उन्नत प्रविधिहरूसँग
तपाईंको संगठनको सुरक्षा सुरक्षा को जानकारी बढाउने योजना?
तपाईं सही बाटोमा हुनुहुन्छ! ईसी-काउंसिलले CEH v10 - सबैभन्दा प्रसिद्ध प्रमाणित नैतिक ह्याकर प्रमाणपत्रको दशौं संस्करण परिचय गरेको छ। CEH प्रमाणीकरणको यो नवीनतम अपग्रेड उत्कृष्ट रूपमा 20 लाई सबैभन्दा उन्नत र प्रचलन सुरक्षा डोमेनको समावेश गर्दछ। CEH v10 ले 340 आक्रमण प्रविधिहरू समावेश गर्दछ जुन प्रायः हैनर्स द्वारा 20 व्यापक मोड्युल मार्फत प्रयोग गरिन्छ।
हाम्रो विशेष CEH v10 प्रमाणीकरण प्रशिक्षण प्रत्येक पक्षमा ध्यान केन्द्रित गर्दछ जसले तपाईंको सफलता पाउँछ। पाठ्यक्रम एक तरिका मा संरचित छ कि तपाईंलाई नैतिक हैकिंग विधि को एक विशेषज्ञ जो विशेष रूप देखि एक प्रवेश परीक्षण या नैतिक हैकिंग स्थिति को लागि डिजाइन गरिएको छ। तपाईं नैतिक हैकिंग कौशल र अभिनव उपकरण को एक संग्रह जो सुरक्षा अभ्यासकर्ताहरु र कलम परीक्षकहरु को संचालन को लागि प्लेटफॉर्म मा काम गर्न को लागि महत्वपूर्ण र जरूरी छ को संग्रह संग आदी हुनेछ। तपाईंले दक्षता विकास गर्नुहुनेछ जसले तपाईंलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त प्रमाण नैतिक ह्याकर प्रमाणीकरण कमाउनेछ!